NextMapping | Fomba an-tserasera vaovao - Fomba hamoronana & havaozana ny hafainganam-pandehan'ny fanovana
Fomba an-tserasera vaovao - Fomba hamoronana & havaozana ny hafainganam-pandehan'ny fanovana
Tena faly izahay manampy amin'ny fampianarana vaovao amin'ny Internet - "Ahoana no hamoronana & havaozina amin'ny hafainganam-pandehan'ny fanovana".
Tamin'ny volana febroary dia nanampy izahay, "Ny ho avin'ny fanarenana sy fihazonana ny talenta farany" fampianarana amin'ny Internet.
Ny lalantsika vaovao, "Ahoana no fomba hamoronana sy hanavaozana ny hafainganam-pandehan'ny fanovana" mikendry ny hanampy ireo mpitarika, ny mpikambana ao amin'ny ekipa ary ny tompona orinasa mba hampiasa fanavaozana.
Manome fijerena ny tantaran'ny fanavaozana ary ny fomba ifandraisany amin'ny ankehitriny sy ny ho avy.
Misy paikady natolotra momba ny fomba hieritreretana kokoa amin'ny famoronana amin'ny fomba tena izy. Misy fanazaran-tena sy fotoana betsaka hampiharana izay ianaranao amin'ny asanao sy ny orinasanao.
Manolotra fe-potoana voafetra ho an'ny a isika vidiny manokana raha misoratra anarana alohan'ny 31 martsa 2020.
Ny ho avy dia mitaky antsika ho mora tohina sy hanova ary ity fampianarana ity dia fitaovana iray hanampiana anao hamorona ny ho avinao! Mianara amin'ny alàlan'ny fampianarana vaovao amin'ny Internet, "Ahoana no fomba hamoronana sy hanavaozana ny hafainganam-pandehan'ny fanovana".